Tartanka kubbadda cagta 2010-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sverige borta från VM
Tartanka kubbadda cagta 2010-ka
La daabacay torsdag 15 oktober 2009 kl 10.20
Xulka qaranka kubadda cagta ee dalkaan sweden, ayaan ka qaybgali doonin oo ka harey tartanka cayaaraha kubadda cagta adduunka ee lagu wado in sanadka soo socda ee 2010-ka uu ka dhacdo dalka Koonfur Afrika .
Waxaa kaloo iscasiley tababarihii xulka qaranka kubadda cagta ee dalkaan Sweden Lars Lagerbäck, maadaama uu horey u balanqaadey in uu iscasilayo hadii kooxdiisa Sweden laga riixo ka qaybgalka cayaaraha adduunka ee ka dhici doona dalka Koonfur Afrika sanadka soo socda.
Denmark iyo Portugal ayaa ka soo baxay qaybtii ay kooxda Sweden ka mid aheyd .
Cayaartii ugu danbeysey ee xulka qaranka dalkaani cayaaro wuxuu la cayaarey dalka Albania ,oo ay Sweden ugu xoogsheegatey 4 gool, halka Albaniyana ay dhalisey hal gool oo agoon ah, guushaasina wax weyn uma tarin xulka Sweden siiba ka qaybgalka cayaaraha adduunka ee 2010-ka.
Portugal ayaa iyadu u soo baxdey cayaaraha adduunka, ka dib markeey si xarago leh ugu xoog sheegatey 4 gool iyo 0 xulka qaranka dalka Malta.